अरिङ्गालले टोकेर एक युवाको मृत्यु, श्रीमानको मृत्यु हुँदा श्रीमतिलाई वास्ता छैन – Gulmiews
अरिङ्गालले टोकेर एक युवाको मृत्यु, श्रीमानको मृत्यु हुँदा श्रीमतिलाई वास्ता छैन
August 21, 2016 Sanju Kauchha
गुल्मी, भदौ ५ । गए राती अरिङ्गालले टोकेर गुल्मी बडागाउँका एक युवाको मृत्यु भएको छ भने एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । बडागाउँ–७ ठुलापोखराका ३३ वर्षिय कुमार कार्कीको मृत्यु भएको हो ।
सोही वडा चुँदरी गाउँका २९ वर्षिय कृष्ण सुनार सख्त घाईते भई रेसुङ्गा अस्पताल तम्घासमा उपचार गराई रहेका छन् । अस्पतालका डाक्टर निरञ्जन पन्तले कार्कीको अहिले सवा ११ वजे अस्पतालमा उपचार गराई रहेको अवस्थामा मृत्यु भएको बताए ।
सुनारको अवस्था पनि गम्भीर भएको उनले जानकारी दिए । चुँदरीगाउँका सुनार र कार्कीका छिमेकी विजय सुनारका अनुसार हस्तीचौर २ को खहरे नजिकै छापचौरमा उनिहरु अरिङ्गाल पोल्न गएका थिए ।अरिङ्गालले टोकेर घाईते भएका उनिहरुले विजयलाई राती साढे १२ वजेको समयमा फोन गरेर वोलाएका थिए । तर उनिहरुलाई अरिङ्गालले भने साढे १० वजेतिर टोकेको र वारी क्षेत्रबहादुर जिसीको परिवारले पारीबाट आफ्नो घरमा ल्याई राखेको र त्यहाँबाट राती नै विजय र अर्को एक जनाले वाईकमा तम्घासको रेसुङ्गा अस्पतालमा ल्याएर भर्ना गरेका थिए ।
श्रीमानको मृत्यु हुँदा श्रीमतीलाई वास्ता छैन
कुनै समय भारतिय सेनाको लाहुरे र निकै आकर्षक युवा थिए गए राती अरिङ्गालले टोकेर मृत्यु भएका उनै कुमार कार्की । खाई लाग्दो लाहुरे कुमारलाई श्रीमान बनाउन पाउ भनेर कामना गर्थे कैयौं युवतीहरु ।
ति मध्ये कार्कीले छिमेकी गाविस मुसिकोटकी एक युवतीलाई मात्र औधी मन पराउँथे । लामो समयको प्रेम सम्वन्ध पश्चात उनिहरु वैवाहिक सम्वन्धमा गाँसिए ।
उनिहरुको सम्वन्ध केहि वर्ष निकै सुमधुर रह्यो । तर पछि खै कारण हो उनिहरु विचमा सम्वन्ध विग्रीयो । कुमारले भन्ने गर्थे मलाई वुटवलका केटाहरु समेत लागाएर पिट्ने समेत लगाई भनेर । जव उनि श्रीमतीसंगको सम्वन्धले तनावमा परे त्यस पछि उनले जागिर छाडेर घरमा लफङ्गीन थाले ।
उनले जागिर छाडेर आवारापन देखाउन थाले पछि उनकी श्रीमतीले छाडेर माईतीमा बस्न थालिन् । भारतिय सेनामा प्रशस्तै पैसा कमाएका कुमार पछि आर्थिक रुपले निकै संकटमा परे ।
उता श्रीमतीले माईतीमै वसेर सम्पत्तीको दावी गर्न थालिन । कुमार झन पछि झन जाँड रक्सीमा बल गर्न थाले । कुमारका वावु पनि भारतिय सेनामा थिए । उनका वावुको पनि त्यस्तै लाउलाउँ खाउँखाउ भन्ने उमेरमा मृत्यु भएको थियो ।
श्रीमानको त्यो अवस्थामा मृत्यु भए पछि कुमारकी आमाको मानसिक सन्तुलन विग्रीयो । घरमा कुमारको हेरविचार गर्ने भनेकै उनकी आमा थिईन तर मानसिक सन्तुलन विग्रेपछि उनले आमाको स्यहार सुसार पनि पाउन सकेनन् । त्यसैले पनि कुमार आवारा बने ।
दिनभरी मजदुरी गर्थे साँझ परे पछि को छ र मेरो आफ्नो भन्ने ? भन्दै जाँड रक्सी खाने गर्दथे । श्रीमतीको याद भुलाउने चिज भनेकै उनका लागि कडा मदिरा थियो । त्यसैको साहरामा उनले एक दशक भन्दा बढि समय सम्म एक्लो जिवन विताएका थिए ।
एकदमै मिलनसार र गाउँमा जसको पनि दुखमा लाग्ने कुमारको मृत्युले उनको गाउँ मात्र होईन छिमेकी चुँदरीगाउँ, दाम्का, चौर, भराह, थुम्का, सेनीपिप्ले र पारी खहरे सम्मका वासीन्दाहरु स्तब्ध छन् ।
तर श्रीमतीलाई श्रीमानको मृत्युले कत्ति नपोलेको स्थानियले बताए । चौरका शिक्षक कृष्ण सुर्यवंशीले भने अस्पतालमा भर्ना भएका कुमारलाई भेट्न उनका दाजु र भाई समेत आज दिउँसो अवेर सम्म गएका थिएनन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव तारा भुसालले ति घाईतेहरुलाई कुनै आफन्त कोही छैनन् लौन वोलाई दिनु प¥यो भने पछि तम्घासमै रहेकी छिमेकी निरा सुनारलाई त्यहाँ पठाईयो ।
उनि पुगेको दुई मिनेट नवित्दै कुमारको प्राण पखेरु गएको खवर आयो । त्यतिवेला सम्म घरबाट उनका दाजु र भाउजुहरु हिँडेका थिएनन् । शिक्षक सुर्यवंशीलाई पछि सम्पर्क गर्दा भर्खर पठाईयो र हामी पनि हिड्दैछौं भने । श्रीमतीलाई बोलाउनु भएन भन्ने प्रश्नमा शिक्षक सुर्यवंशीले भने यहाँ नै छैनन् त कसरी बोलाउनु? वास्तै छैन ।
लाहुरे छँदा कुमारले श्रीमतीका रहरका कुराहरु धेरै पुराए । गहना, कपडा गाउँका अरु वुहारीका भन्दा वेसी हुन्थे । कहिले तम्घास र कहिले वुटवल पुराउथे । वजारमा डेरा गराएर सयलको जिवन पनि विताई दिए ।
माईत गएर वस्दा पनि धेरै पटक लिन गए । यो पंक्तीकार छिमेकी भएकोले पनि कुमार र उनकी जिवन संगिनीका वारेमा धेरै जनाकारी छ । उनी कहिले काँही श्रीमतीको सम्झना गर्दै रुन्थे । उनको कुरा निकाल्दै गर्दा थाप्लो हान्दै रक्सीको वोत्तलबाटै ठाड्ठाडै पिउँथे ।
उनिहरुको सुरु सुरुको प्रेम सम्वन्धको स्मरण गर्दा र आज उनको मृत्यु हुँदा तिनै एक समयकी मुटुकी टुक्रालाई अन्तिम एक नजर देख्न पनि पाएन् कुमारले । कुमारको दुखद मृत्युको खवर गर्न मेरो भाई सुदिपलाई फोन गरें । तर मेरो मुटु भरियो र बोल्न सकिन । उनि मेरो भाई सुदिपका यति मिल्ने साथी थिए ।
उनि गाउँमा वौलाह जस्तो भएर उनको घर र श्रीमतिले हेला गरे पनि हाम्रो परिवारले उनलाई परिवारकै सदस्य जस्तो ठानि रह्यो । उनले हाम्रो पविार लगायत त्यो गाउँमा मर्दा पर्दा मध्ये रात भनेन् । घाम पानी केही भनेन । असाध्धै सहयोगी उनलाई हिजो राती देखि अस्पतालको शैयामा छट्पटीदा त्यस अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी वाहेक मुखमा पानी हाली दिने आफन्तजन कोही भएन् ।
म यति वेला वुटवलमा छु । उनी मेरी श्रीमति निरा अस्पतालमा पुग्दा छट्पटीएका थिए । निरा भाउजुलाई उनले चिन्न समत सकेका थिएन् । कठै उनको आत्माले के भनेको होला ।
उनको वल ताकत र पैसा छउञ्जेल सवको हाई हाई भए कुमार तर मर्ने वेलामा आमा…. आमा……….दाई………… दाई ……….हे बुढी………….भन्दै छट्पटिदा पनि उनले एक झलक कसैको नजर पाउन सकेनन् । भाई कुमार मैले भर्खरै फोन गरेर सोधे । एक्लो भाउजु तिम्रो शव कुरेर बसेकी छिन् । तिमो मृत्यु भएको डेढ घण्टा भयो अहिले । गाउँबाट कोही आएका छैनन यति वेला सम्म । तिम्रो श्रीमतिलाई लिन भने कृष्ण सर उनि वसेको स्थान सम्म जानु भयो रे । उनले म किन जाने एक्लै बसेकी मान्छे भन्दै आउन मानिन रे । यता अस्पतालले श्रीमति चाहिन्छ भनेको छरे । तर उनि नमाने पछि तिम्रो शव उठ्न पनि ढिला र झण्झट हुने भयो ।
सायद वोलेको आगो सवले ताप्छन भनेको यहि होला भाई । ओहो………..यो स्वार्थी दुनिया……..। कुमार जस्तो सवैको अर्गेलो र एक्लो भएर कसैलाई मर्न नपरोस् । अलविदा……………भाई कुमार………..तिमिले जिवित छउञ्जेल त्यस समाजमा गरेको सहयोग म , मेरो परिवार र गाउँका कुनै पनि मान्छेले कहिल्लै भुल्ने छैन् ।
भाई कुमार एउटा कुरा अर्को जन्ममा पनि कशिल्लै नभुल्नुकी श्रीमति भनेका स्वार्थका हुन् । पैसाका हुन ,ईज्जत छउञ्जेल सम्मका मात्र हुन् ।
उनीहरुको स्वार्थ पुरा हुँदा सम्म पाउ पनि मोल्छन त्यो नभए लात हान्छान् , जे पायो त्यसले टाउको फोरी दिन्छन् । भाई कुमार म आज टाढा छु । तिम्रो शव देख्न पनि नपाएकोमा निकै पछुतोमा छु । तर टाढैबाट भए पनि भाई कुमार तिम्रा हजार सम्झनाका अश्रुधारा बगाँउदैं हार्दिक…………..हार्दिक …….हार्दिक श्रद्धाञ्जली……………………..
main Facebook	Twitter	Google+	Pinterest	Linkedin
Related Posts	गायिका मञ्जुलाई माया गर्न कसैले नरोकोस आधुनिक गित (भिडियो सहित)...	September 6, 2016	गुल्मेली पत्रकार थापालाई अमेरिकामा बिशेष सम्मान...	September 5, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	यार्सागुम्बा – कहाँ पाइन्छ ? कसरि बन्छ ? के महत्व छ ? तेजेन्द्र थापाको डकुमेन्ट्री (भिडिओ)